Xildhibaan Xaraf oo sheegay in maxaabiista ku jira xabsiga iyo saldhiga Boosaso ay hal wakhti wax cunaan – Kalfadhi
Xildhibaan Xaraf oo sheegay in maxaabiista ku jira xabsiga iyo saldhiga Boosaso ay hal wakhti wax cunaan
Xildhibaan Maxamed Cabdi Xaraf oo ka tirsan golaha wakiillada Puntland ayaa maanta shir jaraa’id oo uu ku qabtay Boosaso wuxuu ku sheegay in aysan wanaagsanayn xaaladda nolosha maxaabiista xabsiga weyn ee Boosaso iyo saldhigyaduba.
“Waxaa nasiib daro ah in aanu tagnay xabsiyo ay ku xiran yihiin dad masaakiin ah oo saddexda wakhti hal wakhti wax cunaya,” ayuu yiri Xaraf.
Xildhibaanka ayaa qayb ka ahaa xubno ka socday Baarlamanka, Xafiiska xeer-ilaalinta iyo Difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland oo toddobaadkan kormeero ku tegay xabsiga weyn iyo saldhigyo ku yaal Boosaso, kuwaas oo u kuur-gelayay xaaladda xabsiyadda iyo adeegga Garsoorka ee gobolka Bari.
Xildhibaan Xaraf wuxuu sheegay in ay ahayd in adeegga maxaabiistu uu lahaado kayd dhaqaale oo wax loogu qabto, isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in aysan haysan cunto ku filan.
Xukuumadda ayuu u jeediyay in ay beekhaamiso dhaqaalaha isla markaasna raacdo miisaaniyadda. “Waa in aan shirarka dibedda iyo kuwa gudahaba aynu hakinnaa, oo gudaha dib u eegnaa” ayuu yiri Xaraf.
Xildhibaanku wuxuu ugu baaqay in guddiyadda baarlamanka oo xilligan fasax ku kala maqan ay tahay in ay tagaan Boosaso oo muhiim u ah dhaqaalaha, soona eegaan duruufo kala duwan oo uu sheegay in magaaladaas iyo bulshada ku dhaqaniba ay wajahayaan.
Kutlada ugu badan ee golaha wakiillada Puntland oo ah 21 Xildhibaan ayaa laga soo doortaa gobolka Bari, waa tiro ku dhow 3/1 tirada guud ee golaha oo ah 66 mudane.
Shirka guddiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka oo maanta lagu soo xirayo Garoowe
War-Murtiyeed laga soo saaray Shirka Madasha Guddiyadda Dastuurka ee heer Federal iyo heer-Dawlad-Goboleed